မိန်းမလှကျွန်းလို့ခေါ်တဲ့ စီးပွားရေးတက္ကသိုလ်က အချောအလှတစ်ယောက်ဖြစ်ခဲ့တဲ့ ….ဆွေဇင်ထိုက် – Cele Top Stars
မိန်းမလှကျွန်းလို့ခေါ်တဲ့ စီးပွားရေးတက္ကသိုလ်က အချောအလှတစ်ယောက်ဖြစ်ခဲ့တဲ့ ….ဆွေဇင်ထိုက်
December 6, 2020 By admin2Celebrity
တစ်ခေတ်တစ်ခါက လျှမ်းလျှမ်းတောက်အောင်မြင်ခဲ့တဲ့ မင်းသမီးတစ်ယောက်ဖြစ်တဲ့အပြင် ပညာတတ်တစ်ယောက်လည်းဖြစ်တဲ့ အကယ်ဒမီ အန်တီ
ဆွေဇင်ထိုက်ကို ရန်ကုန်မှာ ၁၉၅၃ ခုနှစ်၊ ဇွန်လ ၁၃ နေ့ရက်က မွေးဖွားခဲ့ပါတယ်။ စမ်းချောင်း အထက (၂) ကနေ ၁၀ တန်း အောင်ခဲ့ပြီး၊ ၁၉၇၇ ခုနှစ်မှာ ရန်ကုန် စီးပွားရေး တက္ကသိုလ်ကနေ B.Com. (I.T.) ဘွဲ့ ရရှိခဲ့ တဲ့ လေးစားစရာကောင်းတဲ့ အနုပညာရှင်တစ်ယောက်ပဲ ဖြစ်ပါတယ် ။
တချိန်က ရန်ကုန်တက္ကသိုလ်နယ်မြေမှာ မိန်းမလှကျွန်းလို့ခေါ်ရတဲ့နေရာကတော့ စီးပွားရေး တက္ကသိုလ်ပဲဖြစ်ပါတယ် ။ စီးပွားရေးတက္ကသိုလ်မှာ ကျောင်းသူ အချောအလှပေါများတဲ့အတွက် အခြားတက္ကသိုလ်များဖြစ်တဲ့ စက်မှု၊ တိမွေး/ကု၊ ဆေး(၁ ၊၂)၊ သွား/ဆေးတို့သာမက
ကျောင်းမေဂျာပေါင်းစုံမှ ကာလသားများ သွားရောက်လည်ပတ် မျက်စိအစာကျွေးရာနေရာလည်း ဖြစ်ပါတယ် ။ အဲဒီအချိန်က အန်တီဆွေဇင်ထိုက်က အခုခေတ် မင်းသမီးတွေ ထိုင်ငိုသွားလောက် လှပခဲ့တာဖြစ်ကြောင်း Grace Swe Zin Htaik ဆိုတဲ့ Fan Page ကနေတဆင့် ပရိသတ်တွေကို ပုံနဲ့တကွ မျှဝေပေးခဲ့ပါတယ် ။
အန်တီဆွေဇင်ထိုက်ရဲ့ ငယ်ဘဝမှာ ဘယ်လောက်တောင်လှခဲ့လဲ ဆိုတာကို ဆယ်လီကမ္ဘာ ပရိသတ်တွေလည်း သိနိုင်ဖို့အတွက် ပြန်လည်မျှဝေပေးလိုက်ပါတယ်နော် ။ အန်တီဆွေဇင်ထိုက်ရဲ့ ပရိသတ်တွေလည်း အန်တီဘယ်လောက်လှကြောင်း မှတ်ချက်လေးတွေ ပေးခဲ့ကြပါဦးနော် ။
တစ္ေခတ္တစ္ခါက လၽွမ္းလၽွမ္းေတာက္ေအာင္ျမင္ခဲ့တဲ့ မင္းသမီးတစ္ေယာက္ျဖစ္တဲ့အျပင္ ပညာတတ္တစ္ေယာက္လည္းျဖစ္တဲ့ အကယ္ဒမီ အန္တီ
ေဆြဇင္ထိုက္ကို ရန္ကုန္မွာ ၁၉၅၃ ခုႏွစ္၊ ဇြန္လ ၁၃ ေန႔ရက္က ေမြးဖြားခဲ့ပါတယ္။ စမ္းေခ်ာင္း အထက (၂) ကေန ၁၀ တန္း ေအာင္ခဲ့ၿပီး၊ ၁၉၇၇ ခုႏွစ္မွာ ရန္ကုန္ စီးပြားေရး တကၠသိုလ္ကေန B.Com. (I.T.) ဘြဲ႕ ရရွိခဲ့ တဲ့ ေလးစားစရာေကာင္းတဲ့ အႏုပညာရွင္တစ္ေယာက္ပဲ ျဖစ္ပါတယ္ ။
တခ်ိန္က ရန္ကုန္တကၠသိုလ္နယ္ေျမမွာ မိန္းမလွကၽြန္းလို႔ေခၚရတဲ့ေနရာကေတာ့ စီးပြားေရး တကၠသိုလ္ပဲျဖစ္ပါတယ္ ။ စီးပြားေရးတကၠသိုလ္မွာ ေက်ာင္းသူ အေခ်ာအလွေပါမ်ားတဲ့အတြက္ အျခားတကၠသိုလ္မ်ားျဖစ္တဲ့ စက္မႈ၊ တိေမြး/ကု၊ ေဆး(၁ ၊၂)၊ သြား/ေဆးတို႔သာမက
ေက်ာင္းေမဂ်ာေပါင္းစုံမွ ကာလသားမ်ား သြားေရာက္လည္ပတ္ မ်က္စိအစာေကၽြးရာေနရာလည္း ျဖစ္ပါတယ္ ။ အဲဒီအခ်ိန္က အန္တီေဆြဇင္ထိုက္က အခုေခတ္ မင္းသမီးေတြ ထိုင္ငိုသြားေလာက္ လွပခဲ့တာျဖစ္ေၾကာင္း Grace Swe Zin Htaik ဆိုတဲ့ Fan Page ကေနတဆင့္ ပရိသတ္ေတြကို ပုံနဲ႔တကြ မၽွေဝေပးခဲ့ပါတယ္ ။
အန္တီေဆြဇင္ထိုက္ရဲ့ ငယ္ဘဝမွာ ဘယ္ေလာက္ေတာင္လွခဲ့လဲ ဆိုတာကို ဆယ္လီကမၻာ ပရိသတ္ေတြလည္း သိနိုင္ဖို႔အတြက္ ျပန္လည္မၽွေဝေပးလိုက္ပါတယ္ေနာ္ ။ အန္တီေဆြဇင္ထိုက္ရဲ့ ပရိသတ္ေတြလည္း အန္တီဘယ္ေလာက္လွေၾကာင္း မွတ္ခ်က္ေလးေတြ ေပးခဲ့ၾကပါဦးေနာ္ ။
သွေးသားမတော်စပ်ပေမယ့် သိတတ်လိမ္မာလွန်းတဲ့ ညီမလေးသွန်းဆက်ရဲ့ ဂါရဝပြုကန်တော့မှုကြောင့် ရင်ထဲမှာတောင်ငိုချင်ခဲ့တယ်ဆိုတဲ့ နှိုင်းယှဉ်မြင့်မိုရ်